प्रवास Archives | Page2of 25 | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
गरिबको संख्या बढाउँदै घरभाडा, यस्तो छ अष्ट्रेलियाको गरिबी कथा…
सिड्नी । सिड्नी म्यारिकभिलकी एन्जिला( नाम परिवर्तन) लाई कपडा परिवर्तन गर्नुपर्यो भने अनलाइनमा अरु कसैले प्रयोग गरिसकेको कपडा खोज्छिन् । घरमा केही फर्निचर आवश्यक पर्यो भने पहिले बाटेमा कसैले... Read more
वनभोज आयोजना गर्दै गैर आवसीय नेपाली संघ…
क्यानबेरा । गैर आवसीय नेपाली संघ क्यनबेराले वनभोज कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । अष्ट्रेलिया क्यापिटल टेरेटोरी क्यानबेरा एनआरएनएले वनभोज कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो । १६ डिसेम्बर शनिबार... Read more
सिड्नीमा सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय कन्सर्टपछि आइडल टोलीको अनुभवः ‘ठुलो कन्सर्टमा मज्जै वेग्लै’…
सिड्नी । अष्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेको नेपाल आइडल टोलीले हालै सिड्नी कन्सर्ट सकाएको छ । अष्ट्रेलियासहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा थप कन्सर्टको तयारीमा रहेको टोलीका लागि सिड्नी कन्सर्ट ऐतिहासिक बन्... Read more
फ्युजन फोटो प्रतियोगिताको नतिजा सार्वजनिक, यी हुन् सबैको मन जित्ने तस्वीर…
तास्मेनिया । तास्मेनियाको फोटाग्राफी सेवा प्रदायक संस्था फोटो फ्युजनले आयोजना गरेको फोटो प्रतियोगिताको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । प्रतियोगितामा फेसबुकमार्फत प्रथितयोगितामा सहभागि हुनेको फोटो म... Read more
नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि मन्त्री देव सहितको टोली अष्ट्रेलियामा…
सिड्नी । अष्ट्रेलियाका विभिन्न भागमा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र तथा संभावनाहरु प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देव र नेपाल पर्यटन बोर्डको टोली अष्ट्रेलिया आएको हो । भ्रमणको उ... Read more
मेलबर्नमा मौसमः भारी वर्षासहित आँधीको चेतावनी…
मेलबर्न । भिक्टोरियाको मेलबर्नमा भारी वर्षासहित आँधीको चेतावनी दिइएको छ । अष्ट्रेलियाको जलवायु पूर्वानुमान विभागले केहीबेरअघि सूचना जारी गर्दै शुक्रबार मेलबर्नमा भारी वर्षा सहित ठूलो आँधीको... Read more
एडमण्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गेलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष योजना ल्याईने…
अकल्याण्ड । न्यूजिल्याण्डका लागि नेपाली राजदुत लक्की शेर्पाले नेपाल र न्यूजील्याण्डबीच रहेको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन पहल थाल्ने बताएकी छिन् । केही दिनअिघ न्यूजिल्याण्ड पुगेर र... Read more
यस्ता छन् अष्ट्रेलियाका आश्चर्य लाग्दा कानुनहरु !!!
हरेक देशका आफ्नै नियम कानुन रहेका छन् । जसलाई जान्नु आवश्यक छ । तर, कतिपय कानुन यति आश्चर्य लाग्दा छन् कि तपाईलाई विश्वास गर्न निकै कठिन हुनेछ । कुनै देशमा विवाह पुर्व शारिरीक सम्बन्ध राख्नु... Read more
अष्ट्रेलियामा संभवत अर्को हप्तादेखी समलिंगी विवाह गर्न पाईने…
क्यानबेरा । अष्ट्रेलियामा निकै लामो समयदेखी वहषको विषय बनेको समलिंगी विवाह सम्बन्धि विधेयक उपल्लो सदनबाट स्विकृत भएको छ । उपल्लो सदनमा पेश भएको समलिंगी विवाह सम्म्बिन्धी विधेयक बुधबार बहुमतल... Read more
विधानमा पुगेर अल्झियो अष्ट्रेलिया एनआरएनए विवाद, के भन्छन् पुराना नेता ???
सिड्नी । पदाधिकारी मनोनयनको विषयमा एनआरएनए अष्ट्रेलियामा सर्किएको विवादको धागो विधान कार्यन्वयनको विषयमा आएर अल्झिएको छ । विवादको विषय काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयमा पुगिसकेको भएपनि... Read more